Fitia Boutique - Madagascar Informations
9 novembre 2016 9 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Miezaka hatrany ny fitia boutique hitondra zava-baovao ho an’ny mpanjifa. Amin’ny maha firenena an-dalam-pandrosoana an-tsika dia miezaka isika tsy ho taraiky amin’ny zavatra rehetra momba ny fikarakarana ny endrika amam-bika toy ireo firenena any ivelany.
Manaraka ny kalitao avokoa ireo fitaovana amidy eto amin’ny fitia Boutique ireo, izany hoe 1 ere choix avokoa ary saika ireo firenen-dehibe toa ny any Amerika sy Frantsa no mpanjifa azy.
Anisany tena mampiavaka ny Fitia Botika ihany koa ny fampaniriana volo ao anatiny fotoana fohy, eny fa hatramin’ireo volo efa tsy nety naniry intsony. Manana fitaovana sy vokatra momba an’izany izy ireo, mandaitra be ity produit ity satria vita aminy zava maniry Ginseng, tsy menaka fa ranom-panafody mampaniry volo natao ho an’ireo lehilahy efa sola be. Ahitana fanjaitra madinika tsy hita maso ka sokafana aminy alalana ny masokoditriny loha ka mandetika ny ranompanafody mba hampaniry azy. Maharitra 2 volana ny fitsaboana ka rehefa tapitra izany dia efa maniry ny volo.
Manana tombony afaka hisitraka izany isika.
← ZUMBA MARATHON : LE PLUS GRAND ÉVÈNEMENT DE DANSE FITNESS À MADAGASCAR
GRAND DOSSIER BEALALANA: Un problème environnemental de 250 km2 →
Mivoatra ny tontolony lamaody eto Madagasikara
20 octobre 2017 Gasikara 0
125 ans du Centre Hospitalier de Soavinandriana: un nouveau bloc de chirurgie cardiaque
17 décembre 2016 Madagascar Informations 0